Isu tinokudzidzisa iwe kubira iyo iPhone kuisa mahara maapplication | IPhone nhau
Kana ndikati izvo jailbreak Iyo inotipa isu nyika izere yezvingaitika, ini handisi kuwana chero chinhu. Tinogona kusvetuka zvirambidzo zvakaisirwa neApple uye nekuisa zvinobatsira zvikuru, kunyangwe zvimwe zviri zvehunhu hunopokana. Uye, tichitaura nezvechakanaka kana chakaipa, isu tinogona zvakare gadza zvakaputsika maapp pasina kubhadhara kana sendi rimwe chete.
Kubva pakuona kwangu, iyo piracy haibatsire munhu. Mumimhanzi, software nezvimwe zvinhu zvakafanana, kana isu tese pirate tichave tichigadzira mugadziri / muimbi asingakwanise kuwana raramo nezvatinoda, saka ivo vanorega kuzviita uye isu hatizokwanisa kuzvifarira. Wese munhu anogona kuita zvavanotenda, asi ini ndinozviona saizvozvo. Kune rimwe divi, kugona kuyedza zvinhu usati wabhadhara izvo zvinogona zvakare kunge iri zano rakanaka. Izvo zvakati, inotevera isu tinokuratidza maitiro ekuisa akatsemuka .ipa mafaera pane yako iPhone, iPod kana iPad.
1 Maitiro ekuisa pirated maapplication pane iPhone
1.1 Ndi iPhone software
1.2 Ndi iTunes
2 Iyo garandi yakarasika kana iyo iPhone yakabiwa?
3 Ndedzipi njodzi dzandinomhanya kana ndikabaya iyo iPhone?
4 Ini ndinogona kugadzirisa pirated iPhone maapplication?
Maitiro ekuisa pirated maapplication pane iPhone
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuisa Cydia tweak iyo iwe yaunowana mune zvisiri pamutemo repositori (ini ndinokurudzira repo.hackyouriphone.org). Ndezve AppSync uye, zvinoenderana nekuti iwe uchaiisa riinhi uye kubva kunzvimbo ipi, iwe unowana imwe kana imwe vhezheni. AppSync 9+, AppSync Yakabatana kana chero chinzvimbo chekusarudza chako chaida kunge chakachidaidza chinofanira kunge chave kuwanikwa. Kana tangoiswa, tichava nesarudzo mbiri:
Ndi iPhone software
Iyi nzira haisi yakapusa, asi ndiyo inonyanya kubatsira kune vazhinji vashandisi nekuti inogona kuita zvese kubva ku iPhone.
Ichi ndicho chimwe chekutanga kunyorera dzimwe nzira dzekuisa0us izvo zviripo kubvira kunyangwe pamberi pechishandiso chakakurumbira kurodha pasi nekuisa mapirati ekushandisa zvakanyangarika. Kuisa iyo, iwe unofanirwa kuenda kune http://www.vshare.com ne iPhone Safari uye sarudza iyo apple icon.
AppSync inokutendera iwe kuisa iyo application kubva kune imwechete browser. Kamwe yaiswa, iwe unofanirwa chete tsvaga iyo yaunoda application uye download iyo. Unogona kuona zvinongedzo, mune iyo kesi iwe unofanirwa kusarudza imwe uye wotanga kurodha pasi kuti uzviise gare gare.
appcake: Ichi chishandiso zvakare chakare kwazvo, uye chaizvo izvo zvinoita kuti chivimbike. Kuisa AppCake tichaenda kune webhu https://www.iphonecake.com uye zvimwe zvacho zvakada kufanana ne vShare.
Kune zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa, asi izvi zviviri ndizvo zvandinokurudzira. App Addict, ine chishandiso chandakadudzira muchiSpanish muzuva rayo, ine matambudziko emukati pakati pevagadziri ayo zvinoita kuti zvikone kuikurudzira. Muchokwadi, kana ndisina kukanganisa ivo vakanyangarikawo, kugumisa zvimwe zvezvinhu zvavo muAppCake.
Iyi ndiyo yakapusa uye yakakurudzirwa. Iyo vShare uye AppCake mawebhusaiti anotibvumidzawo kurodha pasi .ipa faira kukomputa yedu. Kamwe iyo .ipa faira radzingwa, isu tinongofanira kuita dzora kaviri nezvazvo kuitira kuti tikwanise kuikopa kuTunes. Pane imwe nguva muTunes, isu tinongofananidza ne iPhone yedu, iPod kana iPad uye iTunes ichaisa iyo kwatiri. Hapasisina.
Kana iwe usiri kuda kuyananisa neTunes, kune imwezve sarudzo, iko kurodha pasi .ipa pakombuta yako wozozvitumira ku iPhone kuburikidza neIfile kuti uzarure neVShare kana AppCake. Iri rinogona kunge riri zano rakanaka kana iyo faira ratinoda kurodha rinorema, sezvo kurodha pasi nemaapplication kunogona kutora nguva yakareba.
Iyo garandi yakarasika kana iyo iPhone yakabiwa?
Uyu mubvunzo hauna mhinduro yakajeka. Unofanirwa kudaro isu hatisi kurasikirwa nevimbiso kana kugura iyo iPhone. Ini ndinoti "kufungidzirwa" nekuti Apple inogona kuita dambudziko kugadzirisa iyo iPhone kana isu takaipaza mujeri, asi hazvigoneke. Izvo zvinozivikanwa se "kubiridzira" iPhone ndeyekuipaza jeri, iyo inove nekugadzirisa software yayo kuti ikwanise kuita zvinhu izvo mudziyo une default default system isingatenderi.
Asi ngatiendei nezvikamu: akatsanangura izvo iyo jailbreakNyika zhinji, senge United States, uko kune mahofisi makuru eApple, vanoti kutyora kwejeri zviri pamutemo nemutemo. Kana tikasarudza kuzviita kune yedu iPhone, iPod Kubata kana iPad, isu hatizorasikirwe garandi yechigadzirwa.
Kune rimwe divi, kune jailbreak iOS chishandiso isu tinofanirwa kuita inozivikanwa se "kupenya". Kunyangwe zvisingaite, sezvatichatsanangura pazasi, tinogona kuita kuti iPhone yedu isatange uye isapfuure chivharo, asi isu tinogona kugara tichiendesa kuApple uye tichikuudza zvakaitika kwatiri nekuita imwe mhando ye kupenya: kugadzirisa iyo inoshanda sisitimu nenzira yakajairwa, kungave ne iTunes kana kuburikidza neOTA (Pamusoro Pemhepo).
Ndedzipi njodzi dzandinomhanya kana ndikabaya iyo iPhone?
Sezvo isu akatsanangura yapfuura pfungwa, kugura iPhone anonzi jailbreak. Nekupaza kwejeri chishandiso cheIOS chatiri kuwana Super-mushandisi kuwana (inozivikanwawo seMudzi), iyo inotibvumidza kuti tigadzirise izvo Apple isingatitendese nekutadza. Parizvino zvese zvakanaka. Dambudziko nderekuti isu hatisi kuzongovhura musuwo kuti tikwanise kuita shanduko pachedu, asi isu zvakare tichavhura musuwo uyo vamwe vanhu vanogona kuwana.
Chii chinoitika ipapo? Zvakanaka, sezvo tiine rusununguko rwakawanda, tinogona kuisa chikumbiro chakakanganiswa kana tweak nemushandisi yakaipa uye isa kodhi yakaipa neavo vanoba ruzivo rwedu. Hazvina kujairika, asi icho chaicho mukana.
Kune rimwe divi, sekutaura kwandakamboita mundima yapfuura, kupenya kwese kunogona kupinda mudambudziko. Chiyero chekutadza chinenge chisipo (pachokwadi ini handizive chero nyaya), asi isu tinofanirwa kutaura nezvazvo sechiitiko. Kana isu tikamisa iyo jailbreak uye isingakwanise kutanga zvakare, sezvandataura zvakare, tinogona kuitora kuApple Store uye toti zvakaitika kwatiri isu tichiedza kugadzirisa kune yepamusoro iOS vhezheni ne iTunes kana kuburikidza neOTA. Asi ko kana tisina Apple Store kana kupihwa mvumo padyo? Zvichida mune izvo zviitiko, zvakanaka kusiya zvinhu sezvavari.
Ini ndinogona kugadzirisa pirated iPhone maapplication?
Hongu, asi zvine musoro kwete kubva kuApp Store. Kuti tivandudze chikumbiro chatisina kutenga, isu tichafanirwa kuzviita nekukopa .ipa nyowani yeichi chishandiso uye nekuchiisa pamusoro peicho chatinacho kare. Kana tikashandisa app seAppCake, ingoita zvatakaita patakatanga kuikanda: tsvaga, tsvaga vhezheni vhezheni, kurodha pasi uye kuiisa.
Isu tinogona zvakare kugadzirisa kunyorera kudhanilodha iyo itsva .ipa kune komputa yedu, nekudzvanya kaviri pairi uye kuwiriranisa ne iTunes.
Sezvandambotaura pamusoro, piracy haibatsire munhu, saka unofanirwa kuita a kushandisa zvine musoro yeruzivo mune ino tudiki tutori, senge kuyedza chikumbiro kuona kuti inosangana nezvatinotarisira tisati tabhadhara chimwe chinhu chatisingazive kana tichichifarira kana kwete Chinhu chinonzwisisika kubhadhara kubhadhara izvo zvatinoda, sezvo tichizobvumira mugadziri kuti arambe achivandudza. Zvikasadaro, uye kana isu tese tikaita zvakafanana, taizopedzisira taishandisa vhezheni 1.0 yechimwe nechimwe chikumbiro uye tingadai tisina kumbobvira taona makuru makuru senge Tweetbot 4 kana Reeder 3. Unobvumirana neni here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Isa (kutsemuka) kunyorera mu .ipa fomati
Izvo zvinotora nguva yakareba, yakareba hehehehehe. Ini ndiri mumwe weavo vakaisa mafomu muIPA kwenguva yakareba nekuti yakanyatsogadzikana xD. Kana isu tisingafanirwe kugara tichiisa iyo APP neSSH asi iyo IPA iri chiuru zvakapetwa zvirinani. XD
Kana mumwe munhu asingamuzive, zviite pasina kupokana.
PS: - Mune iyo Installer iwe unayo mune chimwe chezvikamu zveiyo clubifone repo iyo yekumisikidza kumisikidza, kuiisa iyo otomatiki kubva kune iyo yekumisikidza pasina kuita matanho ekutsiva iyo faira neSSH.
Ini ndinoita zvese asi kroll uye vamwe havazviise ...
Iyo yekubatanidza inoita kunge isiri muFirefox.
Ndakaedza kuisa chirongwa icho iwe chaunotaura kubva kuMubati. Ini ndave kurodha pasi Monkey Bhora neSpore muIPA asi hazvizviise ... Pamwe hazvina kumbobvaruka?
Kuti utaure kuti pane angangoita maviri zvikanganiso kana kusiiwa mune dzidziso uye izvo kuti kuti zvishande UNOFANIRA kuve neApp yepamutemo App yakatakurwa pane iphone kubata, haifanirwe kunge iri yakabhadharwa, zvakakosha kuva mumwe wevaya vakasununguka, kana usiri Iwe unayo, zvinoitika ndezvekuti kana iwe ukatakudza ipas wotanga kuvhura, zvinobva zvangozvivhara.
Ini ndinokuisira maitiro aunofanira kunyatsovaita
Ini ndinonamatira iwe dzidziso yemabatiro ekuti ungaite sei neipa mashandisiro
1-. Dhawunirodha faira re "MobileInstallation" (Dhawunirodha)
1-. Unganidza kune yedu iPod / iPhone kuburikidza neSSH.
piri-. Enda kudhairekitori «/System/Library/PrivateFrameworks/MobileInstallation.framework»
3-. Isu tinoteedzera uye tinotsiva iyo faira yatakatora pasi. Isu tinopa mazana manomwe nemakumi manomwe neshanu semutengo wemvumo
4-. Isu tinogadzira dhairekitori idzva rine zita rekuti "Zvinyorwa" mune madhairekitori kamwe.
/ zvakavanzika / var / Mobile
Isu tinopa mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe semutengo wemvumo kufaira mune madhairekitori ese
5-. Tinotangazve Kubata kwedu
7-. Kuisa mashandisirwo, tinokopa iyo «.ipa», tinobaya kaviri pairi, uye tinoienzanisa kubva iTunes kuenda kune yedu iPod / iPhone
Uye ikozvino nemaapplication ekushandisa akaiswa neSSH
2-. Isu tinogadzira dhairekitori idzva rine zita rekuti "Zvinyorwa" mune madhairekitori kamwe.
3-. Tinotora mutambo wacho mu .ipa fomati
4-. Isu tinoshandura iyo yekuwedzera faira kubva ku «.ipa» kuenda ku «.zip», vhura iyo faira, enda kune iyo «Payload» dhairekita uye uone iyo «.app».
5-. Unzip iyo folda "xxx.app"
6-. Yakabatanidzwa kune yedu iPod / iPhone kuburikidza neSSH, tinoteedzera dhairekitori «xxx.app» mune dhairekitori / Zvishandiso, uye ndokuigovera iyo 775 semvumo yemvumo
7-. Isu Tinotangazve kana kutangazve Kubata kwedu
Ongorora: Haugone kumisikidza zvakafanana mashandisirwo enzira mbiri, ndiko kuti, kana uine .app application pane yako iPod / iPhone uye iwe uchida kuiisa izvozvi ne .ipa nzira, tanga wadzima iyo .app wozofananidza iyo. kunyorera kubva iTunes.
Rangarira kuti usati waisa chero mutswe tinofanirwa kuisa kurodha zviri pamutemo kubva kuAppStore, kunyangwe iri yemahara, kana isingatibvumidze kuvhura iwo atakaisa
Texuas dai iwe wakaverenga iyo nhamba 3 ungadai wakazviona
3-isa application yemahara kubva kuchitoro chekutanga
Wakaverenga here dzidzo?
wakambozviedza, ndakazviita nekuda kwechikonzero ichocho ndakaburitsa ...
Zvakanaka, ndine urombo nekuti ndakanga ndisati ndaverenga, ndiri sory, kana ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba pamaPhones angu maviri uye inoshanda kwandiri, zviri nani uye zviri nyore kuzviitira Ipa
Zvisinei, kugadzira iyo Zvinyorwa dhairekitori uye kupa 777 mvumo kune ese ari maviri maforodha nezvose zvirimo, ini handina kuzviona mune dzidziso, handiti?
zviri pachena kuti uri kuvhiringidza maitiro ekuisa mafomu mu (app) fomati nemaitiro ekuisa (ipa)
Zvakanaka, ini handizive, asi ndanga ndichiisa mafomu eIpa kubva musi wavakabuda, uye ndanga ndichishandisa iyo iPhone kubva munaGunyana 9, 2007 ndichifamba neshanduro dzese, chero zvakadaro, ndakanamatira maviri tutorials, imwe yeIpa kunyorera uye imwe yeapplication mashandisirwo akaiswa neSSH, ini pakatanga kubvaruka kunyorera kweApp Store kwakabuda, semunhu wese akaaisa neSSH uye gare gare neIpa, nenzira iyo varairidzi vandinoisa ndeavo eiyo peji reRussia dosne ivo vanonamira zuva rega rega kunyorera uye kuti gare gare yakarovera muclubiphone nedzimwe nzvimbo, ini handina kuzviita kana kuzvigadzira pachangu, ndakazviteedzera sezvazviri, uye kunyangwe chiri chokwadi kuti kuve nekushandisa kwemahara KANA YAKANGA iri mune yako dzidziso, iyo iri muMapepa dhairekitori uye nemakumi manomwe nenomwe mvumo kune ese maMagwaro dhairekitori uye mafaera ese arimo, HAIYO mune yekutanga dzidziso uye ese ari maviri akaiswa neIPA uye SSH iyo folda inodikanwa zvakare semvumo, nenzira yekureva kuti riini Vamwe vanhu havana kushandira chokwadi chiri nyore chekusanyora iyo Zvinyorwa dhairekitori pamwe naD hombe, mune chero zvadzinodzokororwa, izvi pamaitiro ekuzviita uye nezvinodiwa uye zvidzidzo zvekuzviita kwenguva yakareba yandinotumira mapeji akasiyana, uye chimwe chinhu chandinotakura ichiita zvakawanda, saka ndinonyatsoziva mashandiro azvo uye nei chisingashande kune vanhu. Zvisinei neizvi, iwe uchiri kufunga kuti ndini ndakavhiringika nekuti hapana chinhu…. Ini ndaingoda kupa izvo zvawange uchishairwa nedzidziso yako, kungoitira kuti vanhu vasapenga, uye sezvo ivo vasingagadzire iro rakanzi folda uye nevamwe, hazvishande kune chero munhu, akapusa.
Pd, taura kuti iro rinodikanwa faira kana MobileInstallation sezvakafanotaurwa na forero inogona kutotorwa kubva kuCydia
red bacar akadaro
Mhoro…. Ruregerero kusaziva kwangu asi, unowedzera sei mvumo kumafaira?, Uye zvimwe zvese zvandakatoita asi ini handina kukwanisa kuita izvo zvemvumo zvemafaira, kana mumwe munhu akandiudza ndichave nekusingaperi ndinotenda…. Ini handibatanidze neSSH ini ndinoshandisa iyo iFunbox ... SALU2
Pindura kune roju bacar
Iyi dzidziso sive yekuisa mushanduro 2.1 yeiyo ipod inobata 1 G? Ini ndinongoda kuisirwa nharembozha ye2.1 yakatsemuka kare?
Pindura kuna vai6
Ndine dambudziko¨: pandinotsiva iyo faira yekuisa nhare yandakaburitsa pandatangazve iyo iPhone, inondisimbisa muapuro diki uye haimbobuda imomo !!!!!!! ipapo ini ndinofanirwa kuchinjira iyo faira iyo yandakanga ndatova nayo ... foni uye ipapo kana ikabata
Pindura kune panther
Chokwadi ndechekuti inoyevedza tuto, yakandishandira zvakakwana. Kune avo vane matambudziko, zvakakosha kuti utangezve iyo ipod / iphone mushure mekushandura iyo mobileinstallation folda uye uve nemutemo application kubva kustorestore yakaiswa pane iphone / ipod. Kana vakasadaro, izvo zvakaputsika kunyorera izvo zvakadzvanywa hazvizoenderana.
Mhoro zvakanaka, ini ndiri newbie mune izvi asi kana ndaita nhanho dzese dzinoiswa, ndatangazve iyo iPhone uye iyo skrini inosviba neapuro, nei zvakadaro, ini hapana chandinoona, chete kana ini ndichibatana iyo kune pc kana ichiona zvese asi kwete pane iphone, uffff, ndibatsireiwo ndatenda zvikuru
Ini ndine zvese zvakaiswa uye izvo asi ini ndine mubvunzo
Iwo maapplication anogona kuvandudzwa senge mamwe kana zvichidikanwa kuti uvandudze iwo nekuisa iwo matsva mavhezheni ????
Ndinodawo kuziva izvozvo
kana iwo maapplication akagadziridzwa,
Mhoro munhu wese, ndinoregeredza nemoyo wese nyaya zhinji dze iPhone uye saka ndinokumbira kubatana kwako kuti utsanangure zvakadzama, kana zvichibvira, maitiro ekugadzira yangu iPhone vhezheni 2.2 (5G77) ishandise semodem yePC yangu inoshanda ne windows xp.
Nekuteerera kwako, ndinokutendai zvikuru.
Ndine dambudziko rekuisa cracker, ini ndinoteedzera maitirwo ese uye haibude. Ndiri kuzotarisira, kutumira chinyorwa, kugadzirisa, kuwedzera, kutumira kunondikumbira kuti ndipinde Cydia / apt url, ipapo ndinonyora Hockulo.us, post souce, painondiudza kuti nditsvage mune zvekushandisa handisi kuwana iyo 2 zvirongwa zvinokumbira uye ipapo handikwanise kuzviisa, FUNGA mumwe munhu andibatsire, ini ndoda kuisa yemahara, yakatsemuka itune chirongwa.
Pindura ku robert2870f
Ini handizive nezvako zvakanyanya ini ndakangozvitumidza zita uye kubva kune cydia kurodha mobileinstalacion uye ssh pasina kuita chero chinhu pasi pemapurogiramu kubva paInternet. Uye ndobva ndaiisa yakavhurwa muitunes uye ndizvozvo kana mushure mekuburitsa application yemahara kubva kuTunes uye ini handiise chero mvumo ipod iyo inondishandira kana ini ndinovaodha kubva hakolus
Pindura kuna Alexmamey
Zvakanaka, ini ndinodhawunirodha chishandiso, ndachiisa paTunes, synchronize ndoenda, uye mubvunzo wangu ndewokuti kana izvi zvichishanda kana ini ndikaita chimwe chinhu chisina kunaka?
Zvakadii shamwari. Zvakanaka ndafamba mumaforamu ese uye ini handisi kuwana iyo yandinoita kana kutaura nezve chinongedzo chekutora mobille intallation 3.0 yeipas ndiyo firmware vhezheni. Kana chero mumwe wenyu akachengeta ndingafarire.
mubvunzo mudiki pasi pekupatsanurwa kunyorera asi ivo vanodzika mumafaira mazhinji uye ini handisi kuwana maitiro ekuita iyo app chero mhinduro ndapota
Jr spano akadaro
Manheru akanaka ndine 3GS neJailbreak uye ndinovhura asi ini ndinoisa xSellize uye handigone kuwiriranisa maHacked ipas unoziva here kuti nei isingashande ???
Pindura Jr Spano
Mhoroi, ndine rakakiyiwa iPhone randakatenga kuMovistar Chile. Ndinoda kuivhura kuitira kuti ndikwanise kuisa maapplication ndisina kuatenga kubva kuStore. Ndinogona here kuipwanya uye nekukiya zvakare mune ramangwana? (semuenzaniso, kuivandudza). Ndinoda kuziva kana ichigona kukiyiwa zvakare kuitira kuti kana ndikazombofanira kuitora kune technical service, hapana dambudziko newarandi. Izvo zvine chero mhedzisiro here?
Kana uchikwanisa ... unogona kuivhura ne redsn0w izvozvi uye kana uchida kuivharira, unoidzosera kuburikidza neTunes sezvawanga uchiita kusvika zvino ... kune rimwe divi (ndinoziva kuti ndakazviona kumwe kunhu, ini usangorangarira kuti kupi chaiko) ndeyekuti Mufaira reiyo iPhone ruzivo rwese nezve mashandisiro aro, maapplication akaiswa, nezvimwewo zvinochengetwa, unoenda kune iyo folda x ssh usati wayidzorera uye wobvisa zvese zvirimo uyezve iwe dzorera ...
PS: Ndinovimba mumwe munhu anoona iyi foramu anokupa iyo kero ...
Ndatenda zvikuru, ndinovimba kuona kana mumwe munhu achizadza Jr Spano!
Mhoro kana uchiona kana mumwe munhu aigona kunditsanangurira maitiro ekuisa mafaera ipod touch nekuti pasi pekushandisa kana mutambo uye pasi mumafaira mazhinji kana uchikwanisa kupindura e-mail yangu ndapota ndinokutendai bna peji
Pane chero munhu anoziva kudzoreredza iyo iPhone kana iyo yekumisikidza kumisikidza haina kushanda uye iko kumba sikirini iri kunamira? Ini handichagona kuwana mafaera kuteedzera iyo yekutanga faira zvakare.
Mhoroi, ndinoda rubatsiro. Ndine cydia pane yangu iphone 3g s asi handikwanise kuisa dzakatsemuka mafomu, ndapota munganditumira link yekuti ndione kuti zvinoitwa sei? Kana haugone kuisa pane nyowani iphone 3g s?
tarisa iyi link ...
unofanirwa kuita zvarinotaura munzira mbiri ...
Kana uine cydia muma3gs watoburitsa asi iwe wakapfuudza iyo ultrasn0w kwairi kuburitsa chip ??? ipapo iwe unogona kuwana zvese ...
Mhoro shamwari ndinoona yako tarenda rakakura mune ino iphone. Ndiri mutsva. Ndakamirira mumwe munhu kuti awane mhinduro yekundibatsira ... ndawana iPhone ndikaenda kunoona shamwari kuti ivhure, akaivhura ndokuisa cydia nemamwe mapurogiramu akanaka kwazvo, chokwadi ndechekuti haisi gadzirisa kana ndiri kurasikirwa nemutemo uye pamberi paMwari nekuti mamwe mapurogiramu akatsemuka uye ini handizive kana ndichigona kuve nematambudziko nemaapuro kana chimwe chakadai. Shamwari yangu yakandiudza kuti pakange pasina matambudziko sekureba sekuti vanhu vanoiita kuti iwanikwe pawebhu kana avo vanoishandisa havaiti kuti vawane purofiti. Ndokumbirawo, kana zvisiri izvo, taura mhinduro ...
Ini ndiri newbie uye vakandiudza kuti iyo cidia application haishande, ichokwadi sei
K rakadaro zuva rakanaka. Ndiri kungoda kuziva kana paine dambudziko kana ndikadzima maapplication mu .ipa fomati kubva kufolda kwandinovachengeta panguva yekuzvirodha pasi, izvi ndinobvunza xk ndaona kuti nguva dk ivo vanoenderana ne iTunes vari yakachengetedzwa mune imwe folda kupi zviri pamutemo. Ndinoda kuziva iyi xk sezvo ini ndatove neinopfuura 3 Gb yandakashandisa pane aya akatsemuka .ipa maapplication andinoda kuadzima kubva kuPC yangu kuti isazove nemaviri. Kana mumwe munhu aigona kundipa iyo ruzivo kana chinongedzo pazvinoonekwa, ini ndingafarire kwazvo. Ndatenda !!
Pindura kuna Wesk
Ndatenda nekukorokotedza foramu yako, yakanaka kwazvo uye iwe unopa yakanaka mipiro.
a favorsote maitiro ekuzviitira firmware 2.2! ndibatsire! ° inobuda yakanaka!
Ndinoisa sei zvinhu pane iyo mini iphone? antony97@hotmail.com ndokumbirawo ubatsire
Pindura kune antony
Mhoroi, ndanga ndichida kuziva ndapota kana izvi zvikatsemuka zvikumbiro zvinogona kuiswa pane yangu iPhone 3gs iyo yandisina kuita jailbreak kana ini ndinofanira kutanga ndavhura. Ndatenda
Hei hama, ndine hurombo ini ndirikutsva kune iyi iPhone ini ndoda kuisa .ipa mafomu pairi asi kumusoro iwe unotiudza kuti titore patched "MobileInstallation" (Dhawunirodha) mubvunzo wangu ndewekuti ndingaite download kupi kubva? Ndokumbira undipindure, ndinokusiira email yangu kuitira kuti ugone kupindura, maita basa
Ini ndinoda maapplication akasainwa eangu iPhone 5, ndokumbira utumire iwo kwandiri
Iwo akanakisa RSS vaverengi ve iPhone ne iPad